သတ္တိ ( ၃ ) မျိုး ထဲက စာရိတ္တ သတ္တိ – Kanaung
သတ္တိ ( ၃ ) မျိုး ထဲက စာရိတ္တ သတ္တိ
Articles	သတ္တိ ( ၃ ) မျိုး ထဲက စာရိတ္တ သတ္တိ	Ko Sai
ဗုဒ္ဓက သတ္တိ ( ၃ ) မျိုး ရှိပါတယ်လို့ ဟောကြားတော် မူပါတယ် … ယင်း တို့မှာ …
( ၁ ) ကာယသတ္တိ ….
( ၂ ) စိတ္တသတ္တိ ….
( ၃ ) စာရိတ္တသတ္တိ ….
လူထုဦးလှက အဲ့ဒီ့တုန်းက ( ၇ ) တန်း ကျောင်းသားတဲ့ …. ။ သူတို့ အဖေက သူတို့ရွာမှာလယ်သမား … ယာသမားတွေကို ချေးငွေထုတ်ပေးတာ ပေါ့လေ … ။ ပုဂ္ဂလိက ချေးငွေထုတ်ပေးတာပေါ့ …. ။ တစ်ခါတော့ လယ်သမားကြီးတစ်ယောက် ချေးငွေလာဆပ်တဲ့အခါအတိုးတွက်မှားပြီး ငွေပိုပေးခဲ့တယ် …. ။ အဲ့ဒီ့လို ပိုပေးမိတာကို လူထုဦးလှရဲ့ အဖေလဲ မသိဘူး …. ။ လယ်သမားကြီးလဲ မသိဘူး ….. ။ ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ လူထုဦးလှက ဘေးကနေတွက်ကြည့်ပြီးတော့ သိနေတယ် …. ။ ဆိုကြပါစို့ …. ။ ငွေ နှစ်ရာ ပိုနေတယ် ပေါ့ … ။
ဟိုတုန်းက ငွေ နှစ်ရာဆိုတာ အများကြီးနော် …. ။ ဒါပေမယ့် လူထု ဦးလှက ၀င်မပြောဘူး .. ။မှိန်းနေလိုက်တယ် …. ။ လယ်သမားကြီး အိမ်အပြင် ထွက်သွားမှ သူ့အဖေကို ပြောတယ် … ။” အဖေ … အဲ့ဒီ့ လယ်သမားကြီး အတွက်မှားတာ …. “” ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ငွေ နှစ်ရာ ပိုခဲ့ပြီ … ” ဆိုပြီး ….ဒီအချိန်မှာ လူထု ဦးလှ အဖေက မင်းတော်တော် … တော်တဲ့ကောင်ပဲကွာ ဆိုရင် …မင်းခိုးတာ တော် တယ် လို့ ပြောတာနဲ့ အတူတူပါပဲ ….. ။
ဒါပေမယ့် … လူထုဦးလှ အဖေက လူထုဦးလှ ကို တန်းငေါက်တာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။“ အဲ့ဒါမင်း သူခိုးစိတ်ပဲ … ဘာလို့သူများပိုက်ဆံကို မတရားယူချင်ရတာလဲ …. မင်း ငါ့ကိုစောစောက မပြောဘူး …. သွား …. အခုချက်ချင်းလိုက်ခေါ် …. ” ” နောက်မှတ်ထား … တစ်သက်လုံးအဲ့တာမျိုး မလုပ်ရဘူး ….သူများ အိမ်နောက်ဖေးက မသိအောင် တက်ခိုးမှ ခိုးတာ မဟုတ်ဘူး ….လိမ်ညာ လှည့်ပတ်ပြီး မတရားနည်းနဲ့ ယူတာမှန်သမျှ ခိုးခြင်းပဲ … ” တဲ့ ….ချက် ချင်း ဆုံးမပြီး လယ်သမားကြီးကို ချက်ချင်းပြန်ခေါ် ငွေကိုပြန်ပေးစေခဲ့ပါတယ် ….လူထုဦးလှ ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံခဲ့တာပါ …. ကျွန်တော့အဖေကြောင့် ကျွန်တော် သူတော်ကောင်းဖြစ်တာပါတဲ့ …. ။မိဘတွေ အနေနဲ့ မိမိ သားသမီးတွေကို သူတော်ကောင်းဖြစ်စေချင်ရင် စာရိတ္တကောင်းစေချင်ရင် ငယ်ငယ်ထဲက ဆုံးမသွန်သင်ရတယ် ဆိုတာလေးပြောချင်တာပါ …..
အထက်ဖော်ပြပါ သတ္တိ ၃ မျိုးထဲမှာ စာရိတ္တ သတ္တိက အခက်ခဲ ဆုံးပါပဲ …..မတရားလုပ်လုိ့ရရဲ့သားနဲ့ မလုပ်ဘူးဆိုတာ စာရိတ္တသတ္တိပဲ ……..လာဘ်စားလို့ ရရဲ့သားနဲ့ လာဘ်မစားဘူးဆိုတာ စာရိတ္တသတ္တိပဲ ……..
credit to မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ ( အရှင် ဇ၀န )
Tags Articles Religious
Previous Articleပညာဟူသည်	Next Article“သင့်ကိုယ်သင် ပြန်ကြည့်ပါ”	Comments (0)